ज्ञानेन्द्र शाहीको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश, कहिले छुट्छन शाही ? — Motivatenews.Com
ज्ञानेन्द्र शाहीको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश, कहिले छुट्छन शाही ?
काठमाडौं – भ्रष्टाचार बिरोधि अभियान्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीलाई छाड्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । शुक्रबारद्धय न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले शाहीलाई छाड्न आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता महेश डंगोलले हालेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै उनलाई छाड्न अदालतले आदेश दिएको अदालतले जनाएको छ । १५ जेठमा शाहीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतले पक्राउ गरेर काठमाडौं पठाइएको थियो । साइबर अपराध मुद्दामा पक्राउ परेका उनलाई सुर्खेत प्रहरीले हिरासतमा यातना दिएको आरोप लागेको थियो ।
तर, कर्णाली प्रदेशका प्रहरी प्रमुख महेशविक्रम शाहले शाहीलाई सुर्खेतको हिरासतमै नराखिएको दाबी गरेका थिए । उनलाई पक्राउ गर्ने क्रममा केही प्रहरी समेत घाइते भएका थिए । शाहीलाई अहिले केहीवेरमा छोडिने प्रहरीले जनाएको छ ।